Susa i-Akhawunti ye-Instagram Abalandeli ▷ ➡ ▷️
Januwari 26, 2019 0 Comentarios 1531
I-Instagram yenzelwe ukwaba izithombe namavidiyo ngemiphumela efana noClarendon, iNyanga, uLark, uReyes, uJuno, iTokyo, uJaypur, iLagos, i-Oslo nabanye. Kutholakala kuhlelo lokusebenza, ukukhombisa ifayili le- uhlangothi lomuntu futhi ibhizinisi yabasebenzisi, futhi kulula ukusebenzisa imisebenzi lapho wenza ukushicilelwa phakathi kwabo: Instagram Izindaba, Boomerang, Instagram Album, ukwenza navigation exhumana emhlabeni obonakalayo Noma kunjalo, futhi unamathuluzi wokulungiselela ubumfihlo njenge, Susa i-akhawunti ye-Instagram.
Yinethiwekhi yokuxhumana nabantu eye yathola ukuthandwa okukhulu ezikhathini zamuva, ifinyelela abasebenzisi abayizigidi ze-1000. Kusukela kwethulwa, ngaphakathi Ngo-Okthoba we-2010 ngabasunguli bayo Kevin Systrom noMike Krieger; Ekuqaleni ibitholakala nge-IOS (Iphone). Ngemuva kwalokho, kwethulwe izinhlobo ze-Android nezakamuva kakhulu zamakhompyutha, ukuze umphakathi ukwazi ukufinyelela kufayela le- ipulatifomu ngaphandle kwemikhawulo.
Uhlelo lokusebenza lunethuluzi elibalulekile njenge: ubumfihlo, ukuze abasebenzisi noma abalandeli balawula ngubani ongabona okuqukethwe, ngaphambi kokwabelana ngakho. Ngakho-ke, ku-Instagram umlandeli anganquma isimo se-akhawunti lapho ibhalisiwe, okungukuthi, uma kunjalo emphakathini, noma ngubani angakwazi buka konke okuqukethwe, kusuka ezithombeni, amavidiyo, landela i-akhawunti futhi uphinde ubuke iphrofayili; futhi uma kunjalo ngasese; Abalandeli abamukelwe ngumnikazi we-akhawunti kuphela abazokwazi ukufinyelela kokuqukethwe.
Umsebenzisi unakho konke inkululeko yokushintsha imodi yobumfihlo; noma kuphrofayela yakhe, ukugwema susa i-akhawunti ye-Instagram ngokuphelele; lapho kuboniswa khona izindaba ezishicilelwe. Ngaphezu kokunquma ukuthi yikuphi okuqukethwe okungabonakala nakho umakiKwenziwe abanye abalandeli. Ngemuva kwalokho ilungiswa kanjena:
Chofoza kuphrofayili ye-Instagram.
Khetha isilawuli sokubonakala.
Khetha ukuthi ubani ongabona iphrofayili yami nezithombe kuwebhu.
Ezinkombeni ezilandelayo zalokhu kukhethwa kokugcina, uhlelo lokusebenza ligcizelela i- isimo sokushicilela, okungukuthi, lapho besesidlangalaleni, bangabonwa yiwo wonke umuntu futhi uma beyimfihlo, bangabonwa kuphela abalandeli ababemukelwa ngaphambili ngumnikazi we-akhawunti.
Izimo zokusebenzisa i-Instagram
Yiba mdala kuneminyaka engu-13
Ungavumeli umuntu wesithathu ukuthi asebenzise i-akhawunti yomuntu siqu
Kuvinjelwe ukushicilela imininingwane yangasese komunye umuntu
Iphasiwedi ongayifaka kumele ibe yimfihlo
Kuvinjelwe ukwaba amavidiyo nezithombe ezikhuthaza udlame
Umsebenzisi unesibopho sokushicilela ngakunye okwenziwe kuhlelo lokusebenza.
Kukhona ezinye izimo ezinikezwa yi-Instagram lapho kuvulwa i-akhawunti; konke lokhu komsebenzisi yenza izibikezelo, ngoba uma kunokuqukethwe okungafanele kwephula izinqubomgomo zayo, i-akhawunti ingamiswa futhi kuya ngecala, i-akhawunti ye-Instagram iyasuswa; ngokuqondile noma okwesikhashana. Futhi akanasibopho se ukusetshenziswa okungafanele kwemininingwane Okomuntu siqu, abanye abasebenzisi abangakusebenzisa ngezinhloso ezahlukahlukene, ngenxa yalokhu, imibandela ethile yobumfihlo iyadingeka evumela imininingwane ukuthi igcinwe.
Ungahle ube nentshisekelo uvule kanjani i-Instagram.
Misa i-akhawunti ye-Instagram
Kunezikhathi lapho umsebenzisi ekhathaza ukusebenzisa i-Instagram ngenxa yezizathu ezahlukahlukene; kungenzeka ukuthi ufuna ikhefu ezinkundleni zokuxhumana, azizwe ukuhlasela ngasese, omunye umuntu usebenzise idatha yomuntu siqu nezithombe ukuvula i-akhawunti, izibuyekezo eziqhubekayo ezinikezwa uhlelo lokusebenza, ngamafuphi; ngakho-ke cha susa i-akhawunti ye-Instagram, inquma ukumisa okwesikhashana.
Lokhu kungenzeka? Vele, inqubo kulula kakhulu, kodwa kulokhu akutholwa kusuka kufoni ephathekayo kepha nge-computer (pc) engena ku-Instagram.com enegama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo, uchofoza inketho hlela iphrofayili, eduze negama; khetha isixhumanisi: Yenza i-akhawunti yami ye-Instagram ingasebenzi Okwesikhashana futhi sekumi ngomumo.
Izithombe nezingaphakathi, kanye ne iimininingwane yephrofayili; bazofihlwa kuze kube yilapho umsebenzisi efuna ukwenza kusebenze i-akhawunti futhi futhi uzoba nalo lonke ulwazi, lokhu, ngendlela elula ngokungena ngemvume njengoba ayenzile ngaphambili.
Ungasusa kanjani i-akhawunti ye-Instagram?
Lokhu kwenziwa kalula, ngaphandle kokutshala isikhathi esiningi. Kungenzeka ukukwenza kusuka kukhompyutha, ngaphambi kokuqhubeka, ungathatha inketho yokugcina izithombe nokunye okuqukethwe lokho fisa umlandeli. Iqiniso elibalulekile ukuthi umsebenzisi kumele aqiniseke ukuthi afuna ukusula imininingwane, ngoba lapho le nqubo isenziwe, akukho ithuba lokuyithola, noma okungenani kuze kube yilapho i-Instagram inquma nikeza izixazululo ezintsha nemisebenzi enikeza ukufinyelela kokuqukethwe okuthile, ukuhlonipha izinqubomgomo zabo zobumfihlo nemibandela eyamukelwa ngesibopho ngabasebenzisi be Umphakathi we-Instagram.
Landela lezi zinyathelo ukususa i-akhawunti ye-Instagram:
Faka lesi sixhumanisi kwikhompyutha.
Khetha inketho ese kwimenyu: Kungani ufuna ukususa i-akhawunti yakho? Kufanele dalula isizathu kafushane.
Faka i-akhawunti futhi ngegama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo.
Khetha inketho: susa i-akhawunti yakho unomphela.
Ungahle ube nentshisekelo indlela yokulanda i-Instagram ngqo.
1 Ubumfihlo be-Instagram
2 Izilungiselelo ze-Akhawunti:
3 Izimo zokusebenzisa i-Instagram
4 Misa i-akhawunti ye-Instagram
5 Ungasusa kanjani i-akhawunti ye-Instagram?
Januwari 26, 2019
Januwari 27, 2019
Ngabe ufuna ukufunda ukwenza imali nge-Instagram yakho ku-2018? Kwenze lapha!